Khibrada Mobilada iyo Saameynta ay kuyeelaneyso Isbadalada | Martech Zone
Talaado, September 1, 2015 Talaado, September 1, 2015 Douglas Karr
Lahaanshaha taleefannada casriga ahi ma aha oo kaliya kor u kaca, shakhsiyaad badan waa dariiqooyinkooda oo dhan ee ku xirnaanta internetka. Isku xirnaantaas ayaa fursad u ah goobaha ganacsiga elektaroonigga ah iyo dukaamada tafaariiqda, laakiin waa keliya haddii booqdahaaga khibradiisa moobiilku ay ka sarreyso tartamayaashaada.
Dunida oo dhan, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa u boodaya lahaanshaha taleefannada casriga ah. Baro sida tallaabadani dhanka mobilka ahi u saamaynayso mustaqbalka ganacsiga e-ganacsiga iyo guud ahaan warshadaha tafaariiqda. DirectBuy, U Guuritaanka Mobilada
Sidee Khibraddu u Saameyneysaa Ganacsiga Mobilada
iyada oo aan hagaajinta mobilada, isticmaalayaashu waxay shan jeer uga badan yihiin inay ka baxaan bartaada.
79% kuwa ka tag bartaada raadin doonaa goob kafiican oo ay ku dhameystiraan iibsigooda.
48% isticmaaleyaashu way ka xanaaqsan yihiin goob aan moobiil ahaan wax laga qaban oo 52% ayaa ah u yar tahay inuu ganacsi sameeyo shirkaddaada.
Tags: 2015Suuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkaisbedelada ecommerce mobilewaayo-aragnimo wareegahagaajinta mobiladataleefanka gacantaisbeddellada wareegajawaab
Sep 2, 2015 at 11: 57 PM
Tani waa mid mudan in laga fiirsado. Isbeddellada maalmahan waa kuwo ay sheegayaan macaamiisha ee aan ahayn dhinac kale. Sidaa darteed, iibiyeyaashu waa inay sidoo kale xoogga saaraan helitaanka isbeddellada iyo ka faa'iideysiga.
Sep 9, 2015 at 7: 32 PM
Haysashada goob diyaar u ah moobiilku waxay unoqonaysaa mid aad iyo aad muhiim u ah, maahan oo keliya sababta oo ah ka wareejinta desktop-ka iyo wareejinta mobilada ayaa sii socon doonta, laakiin sababta oo ah tartankaagu wuxuu si joogto ah u shaqeyn doonaa si aad iyo aad loogu sii fiicnaado moobiilka. Si loo caddeeyo, in la hagaajiyo macnaheedu waa wax badan oo ka badan oo kaliya helitaanka degel wax ka qabta - laakiin ha iga qaldan, haysashada goob jawaab leh ayaa runtii ah bilow weyn! Waxaad layaabi laheyd inta badan oo aan wali heysan midaas!
Sep 10, 2015 at 9: 39 AM
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay Istefanos!